9 Faa'iidooyin oo aad la kulmi karto Marka aad bilawdo dheesha
Faa'iidooyinka Qoob -ka -ciyaarka - Fred Astaire Studios Dance Franchised
Haddii aad ku faanto dhaqdhaqaaq kasta oo aad ka samaysato dabaqa qoob -ka -ciyaarka ama aad u leexato heesaha aad ugu jeceshahay baabuurka dhexdiisa, qoob -ka -ciyaarku waa hawl qof walba ku raaxaysto, si uun ama si kale. Nasiib wanaag, qoob -ka -ciyaarku waa wax aan wejigaaga u keenayn dhoolla -caddayn uun, laakiin sidoo kale kaa caawin kara hagaajinta caafimaadkaaga jirka iyo maskaxda. Waa jimicsi weyn oo maskaxdaada iyo muruqyadaada shaqaynaya si kasta oo aad tahay. Iyada oo leh qaabab badan oo ah Qoob -ka -ciyaarka Ballroom, way fududahay in la helo kuwa aad jeceshahay marka aad bilowdo. Ku raaxayso waqtigii hore ee aad jeclayd adiga oo waliba helaya dhammaan faa'iidooyinkan waaweyn tallaabo kasta oo aad qaaddo.
Kordhi Xoogga iyo Caafimaadka Guud - Qoob -ka -ciyaarku waa jimicsi sidaa darteed, dabiici ahaan, waxay kaa caawin doontaa xoojinta lafahaaga iyo muruqyadaada. Marka xooggaagu kordho, waxaad yeelan doontaa tamar badan oo aad ku sii waddo dheesha. Heerkaaga kordhay ee dhaqdhaqaaqa jirka iyo jimicsiga ayaa kaa caawin kara kahortagga cudurrada sida sonkorowga, dhiig -karka, iyo wadne xanuunka waxayna yareyn karaan halista osteoporosis marka lafahaagu sii xoogaystaan.
Xusuusta Kor - Markaad jimicsi samaynayso, heerarka kiimikooyinka maskaxdaada ee dhiirrigeliya unugyada dareemayaasha si ay u koraan ayaa maaddaama qoob -ka -ciyaarka looga baahan yahay inaad xasuusato tallaabooyin iyo isku xigxigyo kala duwan, awoodda maskaxdaada ayaa kor loo qaadaa taas oo gacan ka geysanaysa hagaajinta xusuustaada. Qoob-ka-ciyaarku wuxuu ku daraa dhowr hawlood oo maskaxeed hal mar-kinesthetic, macquul ah, muusik, iyo shucuur. Isticmaalka kuwan oo dhan waqti isku mid ah ayaa sii kordhin kara dhaqdhaqaaqa neerfahaaga, kaa caawinaya yareynta halista cudurka Alzheimers iyo waallida.
Hagaaji Dabacsanaanta - Isku -fidinta dheesha ka hor iyo ka dib aad bay muhiim u tahay si aad uga faa'iidaysato dhaqdhaqaaqaaga oo aad uga fogaato dhaawac. Markaad sii waddo qoob -ka -ciyaarka waxaad u sii fidin doontaa si joogto ah waxaadna ogaan doontaa sida fiditaan kasta u fududaan doono dhammaystirkiisa. Markay fiditaannadu sii fududaan doonaan, waxaad awoodi doontaa inaad ku sii durugto fidin kasta, adoo abuuraya khadad dhaadheer marka aad si joogto ah u dheerayso muruqyadaada oo aad noqoto mid sii dabacsan. Iyada oo dabacsanaantaan korortay waxaad ogaan doontaa inaad leedahay dhaqdhaqaaq ballaadhan oo qoob -ka -ciyaarkaagu wuxuu noqonayaa mid aad u fudud.
Kordhi Dheelitirka - Si aad u fuliso dhaqdhaqaaq kasta iyo isku xigxiga si sax ah, waxaad u baahan doontaa inaad awood u yeelato inaad ilaaliso xarun xoog leh oo cuf -isjiid ah. Markaad barato dhaqdhaqaaq kasta oo aad bilowdo inaad hesho dabacsanaan iyo xoog sii kordhaya, dheelitirkaaga, dheelitirkaaga iyo wacyigaaga meelahan ayaa si dabiici ah u bilaaban doona hagaajinta, taasoo tallaabo kasta kuu fududaynaysa inaad dhammaysato.
Wadnaha Caafimaadka iyo Sambabbada - Qoob -ka -ciyaarka waa jimicsi weyn oo ku saabsan wadnaha. Markaad sii dheesho qoob -ka -ciyaarka oo aad aragto xooggaaga iyo nimcadaada oo soo hagaageysa, waxaad markhaati ka noqon doontaa kororka ad -adaygaaga. Heerka garaaca wadnahaagu wuxuu sii joogi doonaa muddo dheer mana yeelan doontid dareen ah inaad neefsanayso marka xaaladda wadnahaaga iyo sanbabadu soo hagaagaan.
Iska yaree walbahaarka - Markaad qoob -ka -cayaarayso, jirkaagu si buuxda buu u yahay daqiiqaddaas, oo xoogga saaray muusigga iyo agagaarkaaga. La joogista saaxiibbada ama in qof gaar ah oo ku raaxeysta dheesha muusigga aad jeceshahay ayaa kaa caawin kara inaad xoogga saarto isla marka aad joogto oo kaa caawiso yareynta xaddiga cortisol ee maskaxdaadu soo saarto (hormoonka la xiriira walaaca), hoos u dhig walaacaaga iyo heerarka xiisadda.
Hoos U Dhig Murugada - Qoob -ka -ciyaaruhu wuxuu u noqon karaa hab aad u daweyn iyo caafimaad leh dadka inay soo gudbiyaan dareen kasta oo ay la kulmi karaan. Haddii aad qabtid niyad -jabka, qoob -ka -ciyaarka ayaa ku siin kara meel aad ka hesho shucuurtaada adiga oo adeegsanaya muusig ama dhaqdhaqaaqyo aad ku xirto inta aad ku sugan tahay jawi wanaagsan. Inaad awood u leedahay inaad is muujiso adigoon waxba ka hadlin waxay siin kartaa dareen xorriyad ahaan jir ahaan iyo jir ahaanba. Markaad sii dheesho, waxaad arki doontaa sida qoob-ka-ciyaarku u sahlanaan doono iyo kalsoonidaada iyo isku-kalsoonaantaada ayaa sidoo kale si dabiici ah u kordheysa, gudaha iyo bannaanka qoob-ka-ciyaarka oo keliya ayaa kaa caawineysa inaad sii yareyso dareenkaaga niyad-jabka.
Lumiso Miisaan - Dhaqdhaqaaqa joogtada ah ee qoob -ka -ciyaaruhu wuxuu adeegsadaa kooxo muruqyo ah oo isku mar ah, taasoo kaa caawineysa inaad jisho jirkaaga oo dhan. Daraasad lagu sameeyay Joornaalka Cilmiga Anthropology ee Jir -dhiska ayaa lagu ogaaday in barnaamijka jimicsiga ee tababarka qoob -ka -cayaarka jimicsiga uu yahay mid waxtar u leh sida orodka ama baaskiilka si loo hagaajiyo halabuurka jirka iyo xoogga aerobic -ka. Xitaa waxaad dareemi kartaa isbeddel dabiici ah oo ku saabsan caadooyinka cunnadaada marka aad bilowdo inaad dareento inaad ka caafimaad qabtid dheeshaada, taas oo waliba kaa caawin doonta maaraynta miisaanka.
Kordhinta Horumarinta Bulshada & Kalsoonida - Qof walba wuu ku raaxeystaa la kulanka dad cusub qoob-ka-ciyaarka ayaa bixiya jawi xiiso leh si ay ula kulmaan dadka ay isku danta yihiin- waxay rabaan inay bartaan sida loo dheesho! Jawiga noocan ahi wuxuu ku habboon yahay inuu ka faa'iidaysto xirfadahaaga bulsheed haddii aad ka baxdo ama inuu kaa caawiyo xoojinta xirfadahaaga bulsheed haddii aad leedahay shaqsiyad deggan. Qoob -ka -ciyaarku waa hab fiican oo lagula kulmo saaxiibo cusub waxayna wanaajisaa aragtidaada bulsheed inta aad ku jirto jawi aad dareemi karto ammaan iyo raaxo.
Markaa ... marka lagu daro inaad u tahay madadaalo aad u weyn dadka kalida ah iyo hab aad u wanaagsan oo lammaanayaashu waqti wanaagsan ku wada qaadan karaan - casharrada qoob -ka -ciyaarka balliga sidoo kale waxay waxtar u yeelan karaan siyaabo kale oo badan! Nagala soo xiriir maanta, Fred Astaire Dance Studios si aad uga bilowdo safarkaaga qoob -ka -ciyaarka, oo aad waxtarradaan ugu shaqeyso noloshaada.
Hesho Dalab Intro